Xusuus-qorista Dhaqtarka - Ikkaro
Qeybtaan oo aan jeclahay in aan iraahdo waxay u heellan tahay dabiiciyannimada, waa nooc ka mid ah baloog maalinle ah oo leh wax kasta oo aan ka barto mowduucyo kala duwan iyo dhammaan xogta aan aruurinayo. Ma aha blog, ama degel joogto ah, maqaallada ugu dambeeya lama soo bandhigi doono. Waxay u egtahay wiki oo aan si joogto ah ugu sharaxo una cusbooneysiiyo macluumaadka, si had iyo jeer gacanta loogu hayo
Meelaha kala duwan ee aan ka bilaabo inaan ka tago macluumaadka waxaan iftiiminayaa:
Go'aannada dhirta iyo macluumaadka la xiriira
Xaashida xayawaanka, shimbiraha, cayayaanka, ambiibiyiinta, xamaarato, iyo kuwa kale
Waxaan ku bilaabi doonnaa cilmiga dhulka, saadaasha hawada, ornithology, iwm.
Diyaarad caadi ah
Cayenne, noocyo kale oo ka mid ah Capsicum chinense Waxay ka mid tahay kuwa ugu caansan uguna isticmaalka badan, maxaa yeelay inkasta oo ay leedahay kuleyl badan, haddana waa loo dulqaadan karaa dadka badankood.
Waxay leedahay magacyo badan oo caan ah: cayenne, basbaaska cayenne, basbaas cas, basbaas basbaas.
Waxay ku leedahay 30.000 ilaa 50.000 SHUs gudaha Qiyaasta Scoville.
Xilligan Waa basbaaska ugu fiican ee ku habboon dhadhanka ee aan ku haysanno guriga. Waxay bixisaa cuncun daran laakiin aan laga badin. Kuwa kale sida habanero ah waxay horayba u socdaan inay cabiraan oo cuncun aad u badan iyo carolina reaperWaa wax aan laga fikireynin cunista aadanaha, hahaha.
Sannadkan ayaan doonayaa iskuday jalapenos.
Umulisada toad (Alytes umulisada)
Waa cunug umuliso caan ahAlytes dhalmada). Amphibian caan ku ah Spain oo leh xoogaa yar.
Midkani sheeko yar buu leeyahay. Waan helnay, markii aan nadiifinaynay barkadda. Jiilaal oo dhan kadib adigoon buuxin, waxay ka soo baxday tuubada wax lagu buuxiyo waxayna ku dhacday biyaha. Marka lagu daro 6 tadpoles oo cabir gaar ah leh. Waxaan sii daynay rahii oo waan daryeelnay tadoorada, 3 ka mid ah waxay gaareen dadka waaweyn.
Qabsashadan waxaan uga faa'iideystay inaan gabdhahayga wax baro ku gartaan noocyada furaha, hagaha laba-geesoodka ah ee aqoonsiga ambiibiyiinta ee jardiinooyinka dabiiciga ah ee Isbaanishka. Waxaa u sameysay Wasaaradda isbeddelka deegaanka. Waxaad kala soo bixi kartaa xidhiidhkan iyo sidoo kale waan deldelayaa haddii ay dhacdo inuu lumo in waxyaalahan markaa la joojiyo in la helo. Way i jecel yihiin.
Yar yar, xammeetida dhulka
BoqollaalkiiCentaurium erythraea) waa geedo sanadle ah ama sanadle ah, caadi ahaan aagga badda Mediterraneana oo ku kora carrada liidata iyo kuwa qallalan, oo ku xiga waddooyinka iyo bannaanka dhexe ee keynta, marar badan oo sameeya seero yaryar oo boqolley ah.
Waa geed caadi ah oo ka mid ah dhirta bulshada Valencian halka aan ku noolahay. Waxaan u arkaa sanadba sanadka ka dambeeya gabdhahayguna waxay barteen inay si fudud u aqoonsadaan. Waa kan video gabadhayda 7 jirka ah ee soo bandhigaysa.
Sida loo kala garan karo swifts, liqida iyo diyaaradaha
Swifts, liqidda iyo diyaaradaha Iyagu waa 3 shimbirood oo aad ugu badan magaalooyinkeenna iyo magaalooyinkeenna in kasta oo ay la nool yihiin, haddana dadku way ku wareeriyaan mana awoodaan inay aqoonsadaan.
Waxaan uga tagi doonnaa buug dhameystiran dhammaan tabaha iyo dhinacyada aan ku raadinayno ictiraaf wanaagsan.
LDharka lagu dhaqaaqo ayaa aad uga fudud in la gartoInta udhaxeysa diyaaradaha iyo liqida waa inaan in yar inbadan eegnaa laakiin waxaad arki doontaa sida ay u fududahay.
Liqidda iyo diyaaraduhu waa Hurindinidae reerka ka mid ah Hirundinidae halka swifts yihiin reerka afxiga Apodidae oo macno ahaan macnaheedu yahay cago la’aan.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato mid kasta waxaan haynaa feylasha shaqsiyadeed. Marwalba oo leh xog dheeri ah, sawirro iyo xiisaha
Carolina Reaper ama Carolina Reaper
El Carolina Reaper ama Carolina Reaper waxay ahaayeen basbaaska ugu kulul adduunka sanadkii 2013 oo qiimihiisu yahay 2 Scoville Units, in kasta oo heerarkeeda caadiga ahi ku kala duwan yahay 220 iyo 000 iyadoo kuxiran cabirka miisaanka. Cadho dhab ah oo ka dhigaysa wax aan la cuni karin. Hadda waxaa jira noocyo kale oo spicier ah sida Basbaaska X.
Waa noocyo kala duwan oo ka mid ah Capsicum chinense gaar ahaan HP22BNH uu Ed Currie ka helay shirkadda Shirkadda PuckerButt Pepper. Waa iskutallaab udhaxeysa chili-ka Habanero iyo Naga Bhut Jolokia (oo aan ku iibsan lahaa sannadkan xannaanada carruurta)
Muraayadaha Badda: Tilmaamaha Uruuriyaha
Kuwa aan garanayn, waxaan ugu yeernaa Badda Muraayadaha, Seaglass, Muraayada Xeebta, ama ilmada meeriska ah qaybaha ... Akhri akhriska
Diyaaradda guud (Delichon urbicum)
Sawir laga soo qaaday https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sanchezn
Mid ka mid ah Shimbiraha magaalooyinka ee aan inta badan caadeysan jirnay inaan aragno oo ay weheliyaan shimbiro inkastoo aanaan aqoonsan karin. Diyaaraddu waxay deggan tahay waddooyinkeenna. Waxaan aragnaa iyagoo dhex duulaya oo buul ku leh balakoonnada iyo geesaha.
Waxay ku dhaleen gumeysi beeraha, magaalooyinka iyo magaalooyinka iyo waliba dhul banaan inkasta oo ay soo jiitaan guryaha.
Qiyaasta Scoville waxaa hindisay Willbur Scoville si loo cabiro sida basbaaska kulul u yahay. Wuxuu qiimeeyaa xaddiga 'capsaicin', oo ah walax ku jirta dhir ka mid ah hidde-wadaha Capsicum. Wuxuu ku sameeyay tijaabada 'Organoleptic' halkaas oo uu isku dayay inuu jaangooyo oo uu helo hab lagu iibsado alaabooyin kala duwan. Xitaa inkasta oo ay xaddidan tahay maadaama ay tahay falanqeyn ku saabsan unugyada jirka halka ay ku xirnaanta dadka iyo dareenkooda saan-saanta afka, haddana waxay ahayd horumar.
Maanta (laga soo bilaabo 1980) hababka falanqaynta tirada sida 'Performance High Liquid Chromatography' (HPCL) ayaa loo isticmaalaa si toos ah u cabira xaddiga Capsaicin. Hababkani waxay soo celinayaan qiimaha "halbeegyada dabacsan ama kuleylka", taas oo ah, hal qeyb oo ka mid ah kabsaicin halkii milyan ee budada basbaaska la qalajiyey. Tirada ka dhalatay unugyada ayaa lagu dhuftay x15 si loogu beddelo unugyada Scoville. Looma baahna in la aado Scoville laakiin wali waxaa loo sameeyaa iyada oo loo tixgalinaayo daahfureheeda iyo sababta oo ah waa nidaam horey si weyn loogu yaqaanay.
Noocyada kaladuwan ee noocyadu waxay ka koobnaan karaan wax ka badan ama ka yar Capsaicin, laakiin xitaa hababka beerashada iyo / ama arrimaha deegaanka ayaa go'aamin kara in chili ay ka sii yar tahay ama ka yar tahay xitaa haddii ay ka tirsan tahay noocyo isku mid ah.
Waa noocyo kala duwan oo ka mid ah Capsicum chinense.
Habaneros gudaheeda waxaa sidoo kale jira tiro badan oo noocyo ah
Seeds iyo biqilka
Abuurka basbaaska iyo basbaasku waxay qaadan karaan waqti dheer inay soo baxaan, gaar ahaan haddii heer kulku uusan ku filnayn, laakiin haddii aan kor uga dhigno 30 darajo waxaan ka dhigi doonnaa inay ubaxaan inta u dhexeysa 7 iyo 14 maalmood, miraha ayaa soo baxa oo kuwa cotyledons ah ayaa soo muuqda .
Sawir ah Vincent van Zalinge
Liqidda waxaan u arkaa inay ka mid tahay shimbiraha ugu quruxda badan ee jira. Imaatinkiisa oo ay la socdaan diyaaradihii iyo swifts waxay matalayaan imaatinka guga.
Waa a Noocyada lagu soo daray Liistada Noocyada Duurjoogta ee ku hoos jira Nidaamka Ilaalinta Gaarka ah.
17 - 21 cm iyo dhalinyarada laga bilaabo 14 ilaa 15
Hibernate ee Afrika
Ugaarsiga cayayaanka oo ku hooseeya dhulka
Waxaan arki karnaa iyada laga bilaabo Abriil ilaa Oktoobar.
Bogga1 Bogga2 Xiga →
Isku qor liistadayada boostada
Waan akhriyay oo aqbalay shuruudaha iyo shuruudaha